Goobaha Dalxiiska ee Sandals Hadiyadaha Ciyaaraha Olombikada Caribbean Fasaxyada Bilaashka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Goobaha Dalxiiska ee Sandals Hadiyadaha Ciyaaraha Olombikada Caribbean Fasaxyada Bilaashka ah
Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Goobaha Sandals waxay u Dabaaldegaan Ciyaaraha Olombikada Kariibiyaanka
Ku dhawaad ​​100 Olombikada oo ka yimid jasiiradaha ay Sandals Resorts International ka hawlgasho ayaa la siiyay hibooyin fasax oo bilaash ah Guddoomiyaha Fulinta ee shirkadda, Adam Stewart, si loo aqoonsado dadaalkooda geesinimada leh ee Olombikada Tokyo 2020.
Sandals waxay u dabaaldegayaan 2020 Ciyaartoyda Olombikada ee Kariibiyaanka iyagoo leh hal bilaash oo aan xad lahayn hal habeen oo joogitaan ah, oo ah qeybta ugu sarreysa meel kasta oo Sandals ama Xeebaha ah.
Ciyaartooydu waxay doortaan goobta loo dalxiis tago waxaana laga wareejin doonaa gurigooda haddii lagu dabaqi karo BMW raaxo leh.
Guddoomiyaha Fulinta Stewart wuxuu yiri "kan ugu wanaagsan adduunka wuxuu mudan yahay fasaxyada ugu wanaagsan adduunka!"
Ciyaartoyda Olombikada ee ku soo bilaawday masraxa gunaanadka ee Ciyaaraha ayaa mid walba heli doonaa hal bilaash oo aan xad lahayn oo hal habeen ah, qeybta qolka ugu sareysa ee Sandals ama Xeebaha xeebaha ee gobolka oo dhan oo ay ka buuxaan wareejinta BMW ee raaxada ah ee gurigooda, haddii lagu dabaqi karo , si aad u tagto doorashada. Intaa waxaa dheer, dhammaan ciyaartooydii matalayay waddankooda Olombikada dhacdo kasta waxay heli doonaan raaxo ay ku jirto afar habeen fasaxyada ku yaal Sandals Resort jasiiradooda. Kooxda ka socota Saint Vincent waxay ku raaxaysan doonaan fasaxooda meel loo tamashle tago oo ku taal Saint Lucia maadaama xeebaha Saint Vincent ee aadka loo sugayo aysan weli furmin.
Stewart ayaa markii ugu horreysay baraha bulshada ku abaalmarisay saddexdii Jamala ee bilada dahabka ku guuleystay Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce iyo Shericka Jackson, guushoodii taariikhiga ahayd ee ay ka gaareen gabdhihii 100M ee haweenka, iyagoo ku dhawaaqay, “kan dunida ugu fiican ayaa u qalma kan adduunka fasaxyada ugu fiican! ”
Wuxuu markii dambe u fidiyay joogitaan aan xad lahayn oo la mid ah dhammaan ku guuleystayaasha bilada Jamaica, Bahamas iyo Grenada wuxuuna hadda sii fidinayaa dalabka dhammaan ciyaartooyda Olombikada Tokyo ee ka socda Jamaica, Grenada, The Bahamas, Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent iyo Antigua .
Isagoo ka hadlaya guulaha gaarka ah ee kooxaha si ay u gaaraan Olombikada oo ay u istaagaan barxadda, Stewart wuxuu yiri, “Waxay qaadataa qaddar aad u badan oo naf hurid ah, shaqo adag, u heellannaan iyo joogteyn si xitaa loogu guuleysto Olombikada. Ciyaaryahannadeena Caribbean -ka waxay muujiyeen xushmad la bogi karo, adkeysi iyo ruux dagaal iyo sida sumadda Kariibiyaanka, oo gebi ahaanba ka go'an horumarinta gobolka iyo soo bandhigidda kartideena gobolka, waxaan aad uga faani karnaa cayaaryahan kasta oo halkaas u tagay inuu matalo dalkooda. ”
Wuxuu sii raaciyay, “Waxaan dhahayay kulamada oo dhan, waanan sii wadi doonaa inaan dhaho, 'kan ugu fiican adduunka ayaa u qalma kan ugu wanaagsan adduunka,' mana sugi karno inaan u fidinno rooga gaduudan dhammaan ciyaartooyda Olombikadayada marka jadwalkoodu oggolaado . ”
Ciyaartooyda ayaa lagu wadaa inay helaan joogitaanno lacag-bixin ah oo loogu talagalay bandhigyo heer sare ah iyo dhiirranaan Olimbikada oo la kulmay dib-u-dhacyo iyo hubin la’aan sabab u ah masiibada COVID-19.
Stewart wuxuu raaciyay, “Ciyaarahan iyo bandhigyada ciyaartooydeennu soo bandhigeen waxay ahaayeen waxa aan u baahan nahay si aan kor ugu qaadno niyaddayada wadajirka ah. Marna uma mahadcelin karno ciyaartoydeena ku filan wax kasta oo ay u qabtaan dalalkooda, mana sheegi karno wax ku filan waxa ay dhammaanteen noo tahay, laakiin waxaan hubaal nahay inaan hubin doonno inay haystaan ​​waayo -aragnimada fasaxa ugu wanaagsan ee noloshooda markay furaan ceelkooda -abaalmarino la kasbaday ee Sandals Resorts. "